Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲပျက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
Club မှာ ညို့အားပြင်းပြီး အမိုက်စားဂေါ်ပုံရိပ်တွေချပြလိုက်ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်... September 15, 2019
ဘုရားပေါ်မှာ မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ခြူးလေး... September 15, 2019
ရွှေ FM ဆယ်နှစ်မြောက်ပွဲမှာ မြင်သူတကာငေးမောသွားရလောက်အောင် လှနေခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုး... September 15, 2019
ရွှေ FM ဆယ်နှစ်မြောက်ပွဲမှာ အ၀ါရောင် Dress လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ယွန်းယွန်း... September 15, 2019
ဆယ်ကျော်သက်လေးလို အပြစ်ကင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ နေခြည်ရွှန်းလက်... September 15, 2019
Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲပျက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
July 12, 20190304
လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ သည်းသည်းလှုပ်အမာခံပရိတ်သတ် အများဆုံးအနုပညာရှင် တွေကို ပြောပါဆိုရင် တောင်ကိုရီးယားအိုင်ဒေါအဖွဲ့တွေရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်။ အမာခံပရိတ်သတ်တွေရှိတာဟာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အတွက်တော့ ပျော်စရာကောင်းပေမယ့်လို့ တချို့ပရိတ်သတ်တွေကြောင့်လည်း အိုင်ဒေါတွေခင်ဗျာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာတို့၊ ဒဏ်ရာရတာတို့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးရှိလို့နေပါတယ်။
Thank you Paris💚 #NEOCITYinPARIS #NCT127inPARIS #NCT127TOTHEWORLD #NCT127_1st_World_Tour #NCT127 #NCT
A post shared by NCT 127 Official Instagram (@nct127) on Jul 10, 2019 at 11:14pm PDT
Photo : NCT 127 IG
အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း လန်ဒန်မှာရောက်နေတဲ့ အိုင်ဒေါအဖွဲ့ကြောင့်ဆိုကာ ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုထိတ်လန့်တကြားဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ NCT 127 ဆိုတဲ တောင်ကိုရီးယား boyband ဟာ လန်ဒန်ရဲ့ Wembley ခမ်းမမှာ Neo City – The Origin ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ world tour တစ်ခုကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူတူ ပရိတ်သတ်တချို့လည်းပါလာခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာတော့ လန်ဒန်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာ တည်းခိုခဲ့ပြီး ပါလာတဲ့ပရိတ်သတ်တချို့ကလည်း အဲဒီဟိုတယ်မှာပဲ လိုက်တည်းခဲ့ပါတယ်။
#NCT #NCT127 #NEOCITYinBKK #NCT127inBKK #NCT127TOTHEWORLD #NCT127_1st_World_Tour
A post shared by NCT 127 Official Instagram (@nct127) on Jun 20, 2019 at 10:22am PDT
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာတော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလို မီးလောင်တဲ့အချက်ပေးသံတွေ NCT 127 အဖွဲ့တည်းနေတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုလည်း စီစီညံခဲ့တဲ့အတွက် ဟိုတယ်မှာတည်းနေတဲ့ အဲဒီအိုင်ဒေါအဖွဲ့အပါဝင် တခြားဧည့်သည်တွေရောပါမကျန် ဟိုတယ်အပြင်ဖက်ကို ပြေးထွက်ကာ ဝရုန်းသုဉ်းကားဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကံဆိုးတာကတော့ ဟိုတယ်မှာ အဲဒီအချိန် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေချိန်ဖြစ်ပြီး မီးမလောင်ဘဲအချက်ပေးစနစ်တုကြောင့် မင်္ဂလာပွဲလည်း ပျက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူများကတော့ ကလေးတွေလည်း ပါနေတဲ့အတွက် မီလောင်မှုအချက်ပေးသံဟာ ကျယ်လောင်လွန်းတာကြောင့် ကလေးတွေလန့်ကာငိုယိုခဲ့ကြပြီး အခုလိုလုပ်တာဟာ တော်တော့်ကို ရွံစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ Straits Times မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ NCT 127 အဖွဲ့ဟာ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ စင်္ကာပူရဲ့ Indoor Stadium မှာ ပွဲဆိုဖို့အတွက် ပွဲသီဆိုဖို့ စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။
လကရြှိကမျဘာပေါမြှာ သညြးသညြးလှုပအြမာခံပရိတသြတြ အမွားဆုံးအနုပညာရှငြ တှကေို ပှောပါဆိုရငြ တောငကြိုရီးယားအိုငဒြေါအဖှဲ့တှရေဲ့ ပရိတသြတတြှဖှစေနြိုငလြောကပြါတယြ။ အမာခံပရိတသြတတြှရှေိတာဟာ အနုပညာရှငတြစယြောကအြတှကတြော့ ပွောစြရာကောငြးပမယြေ့လို့ တခွို့ပရိတသြတတြှကှေောငြ့လညြး အိုငဒြေါတှခငေဗြွာ စိတအြနှောကအြယှကဖြှစတြာတို့၊ ဒဏရြာရတာတို့အထိ ဖှစသြှားခဲ့တဲ့အဖှစအြပကွတြှေ အမွားကှီးရှိလို့နပေါတယြ။
အခုတစခြေါကမြှာလညြး လနဒြနမြှာရောကနြတေဲ့ အိုငဒြေါအဖှဲ့ကှောငြ့ဆိုကာ ဟိုတယတြစခြုလုံးကိုထိတလြနြ့တကှားဖှစစြခေဲ့တာပါ။ NCT 127 ဆိုတဲ တောငကြိုရီးယား boyband ဟာ လနဒြနရြဲ့ Wembley ခမြးမမှာ Neo City – The Origin ဆိုတဲ့ ခေါငြးစဉနြဲ့ world tour တစခြုကို ပှီးခဲ့တဲ့ရကပြိုငြးတုနြးကငြွးပခဲ့ပါတယြ။ သူတို့နဲ့အတူတူ ပရိတသြတတြခွို့လညြးပါလာခဲ့ပှီး ပှဲအပှီးမှာတော့ လနဒြနကြဟိုတယတြစခြုမှာ တညြးခိုခဲ့ပှီး ပါလာတဲ့ပရိတသြတတြခွို့ကလညြး အဲဒီဟိုတယမြှာပဲ လိုကတြညြးခဲ့ပါတယြ။
ဇူလိုငလြ ၇ ရကနြမှေ့ာတော့ ရုတတြရကဆြိုသလို မီးလောငတြဲ့အခကွပြေးသံတှေ NCT 127 အဖှဲ့တညြးနတေဲ့ ဟိုတယတြစခြုလညြး စီစီညံခဲ့တဲ့အတှကြ ဟိုတယမြှာတညြးနတေဲ့ အဲဒီအိုငဒြေါအဖှဲ့အပါဝငြ တခှားဧညြ့သညတြှရေောပါမကနြွ ဟိုတယအြပှငဖြကကြို ပှေးထှကကြာ ဝရုနြးသုဉြးကားဖှစပြှားခဲ့ပါတယြ။ ကံဆိုးတာကတော့ ဟိုတယမြှာ အဲဒီအခွိနြ မငျြဂလာပှဲကငြွးပနခွေိနဖြှစပြှီး မီးမလောငဘြဲအခကွပြေးစနစတြုကှောငြ့ မငျြဂလာပှဲလညြး ပကွသြှားခဲ့ရပါတော့တယြ။ ကိုယတြှကှေုံ့ခဲ့ရသူမွားကတော့ ကလေးတှလညြေး ပါနတေဲ့အတှကြ မီလောငမြှုအခကွပြေးသံဟာ ကယွလြောငလြှနြးတာကှောငြ့ ကလေးတှလနြေ့ကာငိုယိုခဲ့ကှပှီး အခုလိုလုပတြာဟာ တောတြော့ကြို ရှံစရာကောငြးတဲ့ လုပရြပဖြှစတြယလြို့ Straits Times မှာ ဖောပြှထားခဲ့ပါတယြ။ NCT 127 အဖှဲ့ဟာ လာမယြ့ ဇူလိုငလြ ၂၀ ရကနြမှေ့ာ စငျြကာပူရဲ့ Indoor Stadium မှာ ပှဲဆိုဖို့အတှကြ ပှဲသီဆိုဖို့ စီစဉထြားပါသေးတယြ။
ဘေဘီမောင်က လူကြမ်းမင်းသား ဦးဇော်ကြီးကို ငွေကြေး လှူဒါန်းပါမယ်….
သားလေးအာချီအတွက် မိတ်ဆွေလေးရှာပေးနေတဲ့ မီဂန်မာကယ်တို့ အကြောင်း….
Club မှာ ညို့အားပြင်းပြီး အမိုက်စားဂေါ်ပုံရိပ်တွေချပြလိုက်ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဘုရားပေါ်မှာ မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ခြူးလေး
ရွှေ FM ဆယ်နှစ်မြောက်ပွဲမှာ မြင်သူတကာငေးမောသွားရလောက်အောင် လှနေခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုး